Taliska ciidamada PSF iyo kuwa PMPF oo ka jawaabay hadalkii Wasir Raage ee ahaa “Ciidamada PSF iyo kuwa PMPF nagama amar qaataan” (daawo) – Radio Daljir
Febraayo 10, 2019 10:38 b 1
Shir jaraaid oo ay maanta ku qabteen magaalada Bosaaso saraakiisha ciidamada PSFta Puntland iyo kuwa PMPFta ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka dekedaha iyo gaadiidka bada Puntland Siciid Maxamed Raage ee ahaa in ciidamadan aysan ka amar qaadan dowladda Puntland.
Wasiirka ayaa hadakan sheegay xili uu marti ku ahaa barnaamijka Maanhadal ee radio Daljir .
“Waxaan doonayaa inaan idiin cadeeyo in ciidamada amniga ee Puntland ku sugan ay yihiin hal ciidan magacyada hakala duwanaadaan lkn dhamaan ciidamada waxay leeyihiin xiriir shaqo iyo hal talis”, ayuu yiri taliyaha ciidanka badda Puntland oo beeniyey hadalka wasiirka.
Ciidamada Puntland oo beeniyey hadalkii wasiir Raage.
"Waxaan doonayaa inaan idiin cadeeyo in ciidamada amniga ee Puntland ku sugan ay yihiin hal ciidan magacyada hakala duwanaadaan lkn dhamaan ciidamada waxay leeyihiin xiriir shaqo iyo hal talis", ayuu yiri taliyaha ciidanka badda Puntland oo beeniyey hadal uu dhowaan sheegay wasiirka Dekedaha ee Puntland.
(SUICIDE PROJECT & ISRAELIAN TERRORIST GROUP)IS NOT MUSLIMS.SURE.